qaabka qalmada xalaasha iyo meelaha laga bilaabo | Gaaloos.com
Home » galmada » qaabka qalmada xalaasha iyo meelaha laga bilaabo
qaabka qalmada xalaasha iyo meelaha laga bilaabo
Dingniin:Ha Ka WalWalin Ciyaarta Sariirta Haddii Qalabkaagu Yaryahay Anagaa Xal Kuu Hayna..Ragga qaar ayaa waxa ay ka cawdaan in ay dareemayaan wal wal xagga hawlgalka ah waayo mar waliba waxa ay isweydiinayaan haddii qalab saan oo kale ah aad kula falgashid xaaskaada armey ceeb iyo balaayo kaa soo raacdaa.
Waxa ay dhowr jeer ku fakaraan sidii ay cabirka malabyarowgooda u kor dhin lahaayeen sida aan ognahay aduunyadan aynu dul saaran nahay ayaan maalin waliba shirkadaha dowooyinka waxa ay soo saaraan dawo wax un ku kordhisa cabirkan yar ee ragga qaar waalida ku rida waxaana ku baxa malaayin dollar.
Illaah ayaa qaalqigiisa si doonay u abuuro kala duwanaanshah umadaanna waa wax uu Illah u qorsheeyay aduunka maamulkiisa , waxaana wanaagsan qof waliba in uu ku qanco abuurista Illah.
Nimanka ka cowda yaraanta bahalkooda ayaa mar waliba wax ay ku dadaalaan mar un sidii ay wax un ugu badali lahaayeen cabir xumada haysata bahalkooda
.Arrinkaan ayaa mararka qaar waxa uu sabsaba cudurada maskaxda ah waayo qofka mar hadduu uu qanaacada ka tago waxa imaanaysa in uu isku buuqa kadibna isbitaal sidaas uu ku galo.
Ku qanac qadarta aad heshay mana ah in ay ragga qaar ee kaa cabir weyn in ay ku dheeryiin raaxo waxaaba laga yaabaa in ay iyagana ay ka sheeganayaan balaaoyo kale iyo raaxo dara sababtay cabirkiisa oo weyn
ama biyo bax degdega ah uu ka cabanayo misna ma ogtahay guska yar inuu ka xariifsan yahay midka weyn oo ka adagyahay dumarkun jecelyihiin gus yar misna adag
Title: qaabka qalmada xalaasha iyo meelaha laga bilaabo